Kufa kwemahara uye yakavhurika sosi software. Nhema kana chokwadi? | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura ndakaita zvivi zvakaipisisa. Gakava dzidziso dzaSt. Richard Stallman. Kuzvipira kwangu kwaive mukutaura izvozvo Muzera ratiri kurarama mariri, rusununguko rwune software yemahara haina basa.
Mhinduro dzevaya vaisabvumirana neni dzaive kusaremekedzwa kwavo uye kutyisidzirwa kuti varege kuverenga blog futi. Hapana akapokana nezvakataurwa. Imwe yei Makambani makuru e tech haafanire kuve nehutongi hwekodhi kutonga uye kutonga vatengi vavo.
Iyo yemahara software yekufambisa yaive yakagadzirwa nevagadziri kugadzirisa matambudziko echirongwa. Kunyangwe yakavhurika chirongwa chekuvandudza nharaunda chakarongeka nenzira yekuti lkodhi mipiro yaikosheswa kupfuura mamwe marudzi. Apo, komputa yakave yakakura, ichigadzira mamwe matambudziko senge kuzvitonga nekushayikwa kwehukama, Stallman nevateveri vake vaingotenda kuti izvo zvakakosha kuvagadziri zvaizove zvakakosha kune vasiri-vagadziri.. Vakanga vasina kururama.
Facebook, Twitter kana WhatsApp ivo vakavakwa pamwe vachishandisa yakavhurwa sosi software maturusi. Kunyange makambani aya akaburitsa zvitoro zvavo zvemabhuku. Saizvozvo, Kune mamwe emahara software dzimwe nzira senge Diaspora, Mastodon kana Signal. Asi, vazhinji vevanhu vanosarudza kuramba vachishandisa Facebook, Twitter kana WhatsApp.
Uye vanosarudza kuramba vachizvishandisa, nekuti Panzvimbo pekugadzira chigadzirwa kugutsa iyo ego yevagadziri, ivo vakagadzirwa kuti vapindure kune izvo zvido zvevanhu. Diaspora, Mastodon uye Signal vakanonoka uye kungogadzirisa zvinhu izvo zvisina kukoshesa ruzhinji.
Muma80, mucherechedzi weindasitiri akatsanangura kuti sei maJapan kusvika zvino akunda maSwitzerland mumusika wewadhi yedigital
Hapana anozviremekedza tenzi wachi wachi anogona kukanganisa basa rake reinjiniya nekuwedzera macalator, mitambo, uye alarm yekurira. Kuna Elisa.
Zvakazoitika kuti vanhu vaifarira kuti wachi yaiita zvinopfuura kungotaura nguva, uye havana basa nazvo kuti yaisatora hupenyu hwese.
Yemahara uye yakavhurwa sosi sosi vanogadzira vakaita seSwitzerland vatambi. Kutadza kufunga kupfuura izvo ivo nevamwe vavo vanofunga chirongwa chinofanira kuita. Iwe unogona here kufungidzira kuita kwaLinus Torvalds kana mumwe munhu akafunga kuisa chimwe chinhu mukernel nekuda kwekuti zvinonakidza?
Kufa kwemahara uye yakavhurika sosi software. Chiono chaTarik Amr
Tarek Amr injinjiniya ane hunyanzvi muMachina Kudzidza. Anoenda kupfuura ini uye dhaiza , que yemahara uye yakavhurwa sosi software yakafa. Anozvitsanangura nenzira iyi:
Hapana chinotadzisa chero munhu kuti agadzire vhidhiyo kana mimhanzi inoridza, pikicha mupepeti kana yekutaura application pasi pemahara kana akavhurwa masosi marezinesi. Chaizvoizvo, pane atove mazhinji eaya akagadzirwa makore makumi maviri apfuura uye iwo aishandiswa zvakanyanya. Aya mapurogiramu achiripo, mutsauko chete ndewekuti shanduko mbiri dzakakosha dzakarasika; gore nekubatana pakati pehardware nesoftware.
Amr anoti vanhu vanosarudza kushandisa masevhisi egore seSpotify, iTunes, kana Netflix inosanganisa mutambi uye zvirimo mune imwe mhinduro kubvisa kudiwa kwekuiwana, kurongedza nekuichengeta.
Nezve kushandiswa kwemhinduro dzekupokana kusavimbika sePopcorn Nguva, mainjiniya anoti izvi zvinogona kushandiswa pamakomputa. Asi, Mune mbozhanhare, smart maTV uye mamwe madivayiri uko Hardware uye software zvinoumba unit, zvinova zvinowedzera kuoma kuisa aya marudzi ezvirongwa
Zviri pachena, kubva pamienzaniso yandambotaura, kuti kunyange makambani ari kuwedzera kushandisa software yemahara, muhupenyu hwezuva nezuva hwevatengi zvirongwa zvese zvinoshandiswa zvakavharwa sosi.
Vanogona kunditsamwira, pamwe neTarek Arm uye nesu tese tinotsunga kubvunza dzidziso dzechinamato chesoftware yemahara. Asi, mambo achiri akashama.
Kutora Tarek Arm zvakare
Izvo zvakakwana kubvuma kuti Mahara Software uye Open Source mazano akafa, sezvo nharaunda dzemakomputa uye masisitimu epamutemo mavakagadzirwa zvanyangarikawo. Izvo zvakakosha izvozvi ndezvekuti kune vatsva vatsigiri vanonzwisisa makore ezvehupfumi, masisitimu ezvemitemo anhasi, uye pamwe matekinoroji senge blockchain uye zvibvumirano zvakangwara, uye vanouya neimwe nyowani, yazvino sarudzo kune software. Mahara.
Ini ndaizowedzera izvozvo isu tinoda yakavhurwa sosi mapurojekiti anonzwisisa izvo zvinodiwa uye zvinodiwa nevatengi uye inoshanda senheyo yekugadzira masevhisi uye zvinoshandiswa izvo vanhu vari kufarira kushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kufa kwemahara uye yakavhurika sosi software. Nhema kana chokwadi?
Pfungwa iyi haisi yekupinda mukurwiswa pachako asi zvinoita sekunge iwe hauzive mutsauko uripakati pe "software yemahara" uye "yakavhurika sosi" kuti kunyangwe padanho rehunyanzvi vanogona kuve vakaenzana padanho reuzivi, hazvisi izvo.
Vanhu vangangoda mhinduro senge Netflix, asi mhinduro senge Netflix zvechokwadi vanovimba neyakavhurika sosi mhinduro dzekushanda, WhatsApp pachayo inoshandisa Signal ye data encryption.
Nekudaro, kana ndikaona mahara software iri munjodzi, makambani akabvisirwa rusununguko rwune, ivo vanongobatsira kuvhura software sosi nekuti inovakwanira uye ivo vanoedza kuwana kwakanyanya kutonga, ndosaka Apple ichida kubvisa zvese zviri GNU Mune maMAC avo, muBBVA kwandakashanda, ndakanzwa zvinhu zvakaita se "Dzivisa software iri GPL". Zvitoro zveapp zvakagadzira dambudziko rakakura kuyedza kugadzirisa imwe, ingo tarisa kuCanonical kuyedza kudzora Snap zvakanyanya sezvazvinogona.
Nei Microsoft isingaratidze kuda kwayo Linux nekuburitsa vhezheni yeOfisi?
Kana iwe uchifunga kuti yemahara software haina kubudirira, iwe unenge wakanganisa zvachose. Iwe unofunga kuti chinangwa ndicho chawakaratidza muchinyorwa here? Kana iwe unofunga chii chiri chinangwa chemahara software, kugadzira rako rekurota desktop uye iyo isu tese yatinofanira kushandisa? Kana iko kunyorera mameseji kwaunoda? Zviripachena kuti ndiri wekutanga kuona njodzi huru yeWhatsApp, asi yemahara kana yakavhurwa sosi software yakazvarwa uye iripo sedziviriro yeruzivo sembiru yakakosha, asi kwete kuronga mashandisiro aunoda kuti tese tishandise. Kuti monopolies inoshandisa mahara software mune yakasviba nzira? Icho chinhu chaicho chisina kana nesoftware yemahara, ivo vachashandisa zvisimba zviito vachitaura kuti izvi zvakatinakira isu uye ivo vanoita chero chavanoda, vachishandisa mukana wepamutemo maburi. Kuti vanhu havakoshese kuvanzika kwavo uye kunyangwe iwe ukati pane kushungurudzwa vanokupa mitsara isina musoro, kunyangwe iwe uri mukominisiti kana asina musoro upenzi husingagadzirisike zvekuti vanonyadzisa vamwe. Iko kune maitiro ekudzora mifananidzo emakambani aya, kunanga vavengi uye kuchenesa mufananidzo wavo, uye iri idambudziko rakakura muzana redu remakore sezvo zviitwa izvi zviri kushandiswa munzvimbo dzese. Makambani akasarudzika mukutamba mitambo yakasviba. Pasina kuenda kumberi, musangano weApple, wakaratidza vhezheni yechisimba mukutora kwayo kwakanyanya kuratidza kuti MacOS yakanaka kwazvo uye dzimwe dzese dzakashata. Kana Microsoft kuti pese painenge ichiteedzera chimwe chinhu kubva kuLinux nyika, vanobuda mazuva vasati vataura kuti vanoda Linux. Ipapo ivo vanoteedzera izvo zvinobuda mumabhora avo, ivo vanopa shit kune yemahara software uye kune vezvenhau kuti vakanaka sei, kuwanda kwavakaita, zvese zvakagadzirwa zvakakwana kubva kumasangano ekushambadzira. Yemahara software haisi yekushandisa, kana desktop, kana Linux, ndiyo nzira yekudzivirira kuti iwe neni tigone kuronga yakavhurika kana yakavharwa application pasina kuudzwa, kunyange zviri nani kuti application yakavhurika, uye isu tinogona kudzidza kubva kune ruzivo uye basa rakamboitwa nevamwe. Uye kusvikira nhasi, chirongwa icho chisingafanirwe kuishandisa hachiwanzoitika, uye pakati pako neni, izvi hazviite makambani mazhinji kunyangwe f ... zvinosetsa. Uye ino inyika yangu kubudirira kukuru.
Mumakore mashanu nguva, kana zvese zvikaitwa mugore uye zvese zvinotengeswa zvimumumu Chromebook -style terminals, tinotaura.
Zvakanaka ipapo, panzvimbo pekunyunyuta, tiri kuenda kunorwa nekuvandudza iwo emahara software software, kumanikidza makambani mazhinji kusangana nezvinetso zvenguva yedu. Funga kuti zvese zvinogona kuberekwa kunyangwe pane peji seLinux vakapindwa muropa, wadii? uye ngatitangei kuvhura gakava, kutarisira kushungurudzwa. Ngatitangei nekuongorora matambudziko azvino, kupa ruzivo rweumwe neumwe. Kuti isu tiri vazhinji uye kunyangwe zvinhu izvi zvichigona kupihwa chimiro chiri nani, patara yetabhawa, mune inotonhorera, tinogona kutanga kupa nharo kupfungwa iyi mune zvakataurwa. Kunyangwe iwo matambudziko ari ane chekuita nekuvanzika pane software yemahara munguva dzino. Ndiri kunetsekana zvakanyanya nekushungurudzwa kwehukama kuri kutora zvese.
Ini ndichatanga neyekutanga:
- Kana mugadziri, semuenzaniso, akaita terevhizheni aine mamwe akachenjera-mhando mashandiro, ese iwo anofanira kunge achishanda pasina kufanira kubatana neinternet chero nguva, kunze kweakanangana uye akananga iwo. Uye ipa iyo yakapusa uye yakapusa nzira yekuvandudza kubva kune usb isina internet. Izvo mu LG ndakapedza kukapu, ndisingataure kuti gadziriso yakabvisa codec nekuti sekureva kwavo rezinesi rakanga rapera. Mubhokisi haina kuisa chero icho, gare gare nekuda kwezvichemo vakachiisa zvakare.
- Izvi zvakakosha zvikuru uye zvinoenderana chaizvo nezvatiri kutaura nezvazvo zvakavanzika, kana mudziyo uine kamera nemakrofoni uye saizi yayo iri huru kupfuura vhoriyamu imwe, ese ma module anofanirwa kudomwa uye anogona kubviswa zviri nyore pasina kurasikirwa warandi uye mudziyo Unofanira kuchengetedza mashandiro ayo kunze kweawo chaiwo uye zvine chekuita nekushandisa kweizvi zvinongedzo. Semuenzaniso kamera yekutora mafoto yakanangana asi TV ine kamera, kwete nekubvisa kamera, haisisiri kutamba mavhidhiyo, ndinoreva. Uye neizvi ndinoreva senge maikorofoni inosora inotakura materevhizheni mazhinji mukuraira.
-Mugadziri wega wega anofanirwa kubatanidza jira rinotsanangura zvinongedzo zvakanangana kupi makopi esoftware emahara ayo avakashandisa nenzira yakajeka mukati menguva yewarandi yechinyorwa. Uye iyo "inenge" haina kukodzera ini, vazhinji vanoiviga mukona yekupedzisira uyezve iwe unowana iyo link uye iwe unowana risingabvumirwe peji kana zvimwe zvisina maturo (Samsung yakasarudzika mune izvi).
Uye ini ndinofunga kuti kunze uko tinogona kuuya nemazano ayo zvakare ane hukama zvakanyanya nesoftware, sekusiiwa nevakagadziri vekuvandudza mamodheru ekare uye vasingatombokupa sarudzo yekuisa chimwe chinhu. Kana terevhizheni kana nhare ikamiswa, pakupera kwewarandi, ivo vanofanirwa kumanikidza makambani kuti avhure iyo firmware kuti nharaunda isangane nayo. Nekuti yangu TV ine kukanganisa muDLNA uye ivo havana kuigadzirisa, uye havazoiti izvozvi. Zvinonditsamwisa kuti zvakapusa kuti muawa ndaizozvigadzirira uye zvaizoshanda nemazvo.
Rita Gutierrez akadaro
Uye haisi kuvhara zvimwe zvingangodaro. Zviripachena kuti misika inosimudzirwa nemakambani esoftware inoedza kuendesa zvese kune iyo gore uye zvinyengeri zviteshi uye ndipo panoshanduka shanduko mukushandisa kwefilosofi yefilosofi. Chero bedzi paine boka diki rinosarudza rusununguko pane kunyaradzwa kana kuchengetedzwa kunodzvinyirira, pachave neakasununguka dzimwe nzira uye kurwira zviri pamutemo izvo zvinoreva izvi Kunyangwe iwo ari madiki, mapoka echimurenga chikamu chebudiriro uye shanduko yakanaka yenzanga huru. Mukuona kwangu, zvivi hazvife zvakakonzerwa nemaonero akatendeseka, anokosheswa, chivi hachisi kuona kupfuura mubako ratinoitirwa nevatungamiriri.
Pindura Rito Gutierrez
"Kana zvese zvikaitwa mugore uye chinhu chete chinotengeswa ipenzi matemu"
Panogona kunge paine akawanda xo desktop makomputa akatengeswa (kwete zvinyengeri zviteshi) pachagara paine. Nhoroondo inofanotaura ramangwana. Pakabuda redhiyo, mapepanhau haana kutsakatika. Pakataura vanotaura, redhiyo haina kutsakatika. Pakasvika terevhizheni, iyo cinema haina kutsakatika. Vhidhiyo payakasvika, TV haina kunyangarika, nezvimwe. Nhasi kune ese, imwe neimwe ine nzvimbo. Saka iwe unoona kuti kufanotaura kwako hakusi kufamba zvakanaka ;-)
Iwe unogona here kufungidzira Linus Torvalds kuita kana mumwe munhu achida kuisa chimwe chinhu mu kernel nekuda kwekuti zvinonakidza?
Mubvunzo iwoyo wakafanana nekudana machisi-emwenje kunakidzwa munzvimbo inowedzera mafuta. Pane daro rakakura pakati peanoseka uye mapenzi.
Iyo software yaunoshandisa kune makomendi inosiya yakawanda yekuda. Ini ndaida kupindura kuna Cristian mune yake yekutanga kutaura uye, zvakadaro, chirevo changu chinoratidzika chakaderera zvakanyanya, mukati meye komendi isina chekuita nazvo. Nekudaro hurukuro haigone kuteverwa zvakanaka.
Wakafunga nezve Disqus? Zvinotaridza kunge zvine musoro uye zvine musoro kwandiri.
Francis Daniel Chavez akadaro
Ini ndinofunga icho chinyorwa chose hachina kusimudzwa zvakanaka, muchokwadi mahara ma software marezinesi haana kana chekuita nekuti vanhu vanoishandisa kana kwete, chinangwa chemahara software chiri kuvhiringidzika, sekufunga kwandinoita ini ndinoshandisa iyi rezinesi kudzivirira vamwe kuedza kwe kuva nekuvaka zvese kubva pakutanga uye panguva imwechete kuti chero munhu anoishandisa haakwanise kuzvivhara, ndicho chete chinangwa, ikozvino urikupa mapuratifomu ari kupa sevhisi uye ayo akavakirwa pasoftware yemahara, izvi zvatove hazvifanirwe ita neemahara software asi asi zvine chekuita nemusika wedigital, uye iyi inyaya yakatosiyana.
Pindura kuna Francisco Daniel Chavez
Iko kuwanikwa nesangano redu rezvigadzirwa zvemadhijitari zvinowanikwa neInternet kuwedzeredza kukuru kwemabasa esangano.
Pane zvikonzero zvakanaka zvekudaro, kukwezva nhengo nyowani, kunyanya vechidiki, kuronga
kutsigira zviitiko zvemitezo yemunhu kuteedzera kunze kwemasangano, internship, uye misangano.
Icho chirongwa chakanakisa uye hachifanirwe kutorwa zvishoma kana, pamusoro pazvo zvese, chinoitwa nemvura irikuvandudza mune
empirical. Icho chirongwa chinofanirwa kuve chakarongeka uye chichienderana neanoziva, anehunhu uye ane mutoro nzira. Muchidimbu, ichaita
Iko kukanganisa kwekushanduka kwakadaro kwechiito chesangano kunobata minda mizhinji uye izvo hazvigone kudzikiswa kusvika
Dambudziko rehunyanzvi. Hatina ingwe yekupingudza uye hatizove nevavengi vekurwa.
Chii chiri kunetsekana:
- Zvehunyanzvi nekutengesa: Kugadzirwa kwewebhu webhu pasi pesangano remubatanidzwa.
- Zvepamutemo: Kugadzirisazve zvemukati mirau, kugadziridza zvibvumirano zvebasa kutora zvese mabasa. mutemo uye zvibvumirano zvechisungo zvesangano, tsananguro yakajeka yesangano remubati semaneja weinternet zvivakwa, mushandisi uye anogadzira zvemukati, zvinoreva kujekesa nezvezvivakwa, kuremekedza zvakavanzika, mutoro kuvashandi, maneja nenhengo, izvi
Iyo yekupedzisira poindi yakakosha zvakanyanya.
- Sangano: tsananguro yemabasa matsva, kusarudzwa kwevatambi, rondedzero yezviitwa zvavo, kudzidziswa.
- Dhijitari kuverenga: kushandurwa kwedhijitari, zvisinei nemhando uye nzira dzinoshandiswa, kuri kukonzera kudzika kwetsika tsika: hunhu hwehukama hwehukama hunogadziriswa uye hwunopararira kumhando nyowani dzehukama,
Kuwanika kune zvemadhijitari zvemukati kunokonzeresa maitiro matsva ekuziva, kugadzirwa kweichi chigadzirwa chemadhijitari
inosanganisira kuwanikwa kwehumwe hunyanzvi husinei nezvekusika chete asiwo kuyera uye
kudzora kushandiswa kwevanogamuchira izvo zvirimo munzira iri kure uye asynchronous, manejimendi ekuchinjana ruzivo pakati pevose vatambi vesangano.
- Kugarisana nevamwe: mhando nyowani yehukama, yakabviswa mumuviri, kure, kure nemitumbi uye kubvisirwa zviratidzo zvisiri zvemazwi, maitiro, manenji uye kuchinjana kwemashoko kunze kweavo vakarerekera uye vasina kudyidzana.
Nzira dzekufungidzira iyi shanduko:
Shanda muprojekti modhi:
Bumbiro reboka rinoshanda kwenguva pfupi iro rinenge richiona nezvechiitiko chitsva ichi.
Tsananguro yezvinodiwa, tsananguro yemabasa anofanira kuitwa, kupihwa kwemabasa aya kuvanhu, kuongorora kwe
Iyi dhivha yakanyanyisa uye chaiyo inokatyamadza zvakanyanya pakutanga kuona, sezvo ichingoerekana yaita kunge Himalaya yekukwira.
Muchokwadi, hazvisi, hapana nhanho yekutevera inotyisa kana kuomarara zvinotyisa, zvinongoda kunzwisisa zvishoma, hunyanzvi hushoma asi isu tatova nezvose mukati mesangano, basa rakarongeka.
Nechokure chinhu chikuru ndechekutevera nehana uye zvine mutsigo shanduko yeaya matsva maitiro muchikamu
kubata izwi redu nekubatsirana kukurira zviitiko izvi uye kuramba tichipa nemutsa uye kusava neudyire kugarisana kwakapfuma uye runako rwezviitiko zvedu zvevanhu.
Kuuya munguva pfupi, Yega-inotarisirwa Nexcloud inoshandisa isu pachedu, jitsi instinct.
Pindura kune idegide
Zviri pachena kuti izvi zvino svitswa muchinyorwa kubva pakuona kwekupedzisira mushandisi, mukutsvaga kwake kusimudzira uye kunyaradza; tichiregeredza hwaro hweuzivi hunoshanda pasi pazvo marezenisi enharaunda eGNU.
Pindura kuna Daniel_Granados
Makumi maviri emakore kubva ikozvino, apo iyo Big 20 tech ichatonga zvese, chinhu choga chakasara chefilosofi yauri kutaura nezvayo ichave Linus Torvalds, Jim Zemlin naRichard Stallman kugadzirisa nyika patafura yemubhawa.
Juan Garcia akadaro
Handibvumirane neizvi. Isu tiri kungoona boom yemahara Hardware, semuenzaniso nhasi zvinoita kuti uve nhare yemahara, chimwe chinhu chaisagoneka kusvika nguva pfupi yadarika (librem, pinephone).
Zviripachena kuti kune dambudziko mukushushikana: Ruzhinji rwevanhu havana hanya nehukama hwavo pamberi pemakambani, uye zvishoma nezve mahara software. Asi izvi zviziviso zvaunoita kuti mumakore X isu isu mahara software vashandisi vanongova nematsi chete zviteshi zvekutenga, ndinozviona zviri kure uye kumhiri kwakatarisana kwechokwadi.
Kana iwe ukataura nezve akajairika mushandisi, iye asina hanya ... tsime, zvinogona kunge zviri chokwadi kuti ari kurasikirwa nerusununguko. Uye zvinogona kuve zvechokwadi kuti urikuenda kunotenga marara avanokutengesa ... kwemakore wave uchingotenga mac kana zviteshi nemahwindo, saka hapana chitsva pasi pezuva.
Pindura Juan García
Ngatione, yemahara software uye yakavhurwa sosi iri mupenyu kupfuura nakare kose. Kuti ine mikana yekushandisa zvisirizvo hazvireve kuti yakafa kana hurongwa hwatova hwechinyakare, zvakapesana. Kuti WhatsApp kana Spotify kana Netflix ikozvino kukunda hazvireve kuti mangwana havasi kuzowira mukusashandiswa, ipapo iwe une muenzaniso weTwenti kana Messenger kana Nokia neyavo nhare.
Yemahara software uye yakavhurika sosi inobvumidza kusiyanisa, inobvumira kuti kana ndichida kugadzira yangu yega mimhanzi server, wozviita, kana ndichida kuona mavhidhiyo kumashure, zviite, uye kana vanhu vachizvifarira, ipapo ndinogona kushambadzira marezinesi service.
Iwe urikukanganisa masisitimu ekushambadzira, nekuti iyo rezinesi system haina kufanana neiyo software yekutengesa system. Zvakafanana nekutengesa tikiti kutengesa nekutengesa kwechivako chemuvhi yemitambo.
Uye kana mumakore makumi maviri tisingade cinema, tinogona kuita imwe. kwete?
Pindura kuna aruleno
Mumwe munhu anozvionawo sezvandinoita. Ndakanga ndave kutotya kumuona ari ega akadaro.
Benzi rinouya richishevedzera kuti: Yemahara Software yafa! Ndiani akamuuraya? Gore!,… Mirira: Ko iro gore harishande here zvese paFree Software? Ah hongu, ini ndaida zvakanyanya kuti nditore Tarek Amr zvekuti handisi kuona zviri pamberi pemhino dzangu! Uye ndiani gehena ari Tarek Amr, nei tiri kumupa izwi pano? Ini handizive, ini ndaingoda kuita nharo nekunyora chinyorwa, sehove inobvunza Chii chinonzi mvura?
Ndiyo "chinyorwa / kururamiswa" kwemaonero anosiririsa andakaverenga muhupenyu hwangu. Iwe wakanyunyuta kuti:
«Mhinduro dzevaya vaisabvumirana neni dzaive kusaremekedzwa kwavo uye kutyisidzirwa kuti varege kuverenga blog zvakare. "Hapana akapokana nezvakataurwa."
uye kune akati wandei mhinduro dzakarongeka uye dzakarongeka uye wakazvikwanira kuvapa iyo "ndege" pasina chaicho kupindura, uchiisa pfungwa yako yekuti pane imwe nguva zvinhu zvese zvichava zvehumambo ... asi zvakanaka ... ndezvako "chinyorwa" ... iwe unoita mitemo yandinofungidzira uye iri kundifambira zvakanaka ...
Pindura kuna Muurh
Ini ndichakutsanangurira iwe kubva padanho revashandisi, ini ndine makumi matanhatu mabhuru, ndakatanga kuisa slackware ine 60 3/1 diskettes, 2 yedata yakawanda, ini ndiri mugadziri uye maneja wekambani, makomputa angu anoshanda, malaptop mu opensuse, iyo yepakati server muDebian, uye malaptop evamwe, mamwe aine windows uye imwe pane mac, 24% ndeye linux, saka kubva pane slackware kusvika 80, iri kunyatso kufira kunze, iyo fu ..., uye vashandi vemumugwagwa usanetseke, izvo zvaasingatsigire windows kana linux, haatsvage, asi haasarudzewo, asi usazvidya moyo iyo kambani hombe yaive ibm, uye zvino haasarudze chero chinhu kana simba, isu tiri Chikwata
Ndinozviona nenzira iyoyo, vazhinji vevanhu vashandisi chete, havana hanya nekuti chikumbiro chakasarudzika sei, vanongomisa chikumbiro, vanonzwisisa kuti ndezvei uye vanofara uye izvo zvinondifadzawo chingotora izvo zvandinokudziridza muchirongwa uye Kana zvikashandira ivo, vanozvitenga saka ndinokunda uye kana yemahara uye yakavhurwa sosi software iripo kune isu tese vanofarira kudzidza nekugovana ruzivo, ivo vatoona kuti makambani mazhinji ane purofiti kubva kune yemahara uye yakavhurwa sosi software nekuti iri yemahara uye vanogona kuitora pasina kuvabhadharira chero chinhu chekurangarira ruzivo isimba uye rakanyatsoshandiswa rinopa purofiti zvakanaka kwazvo kuti vanhu vazhinji vashandisi ve software.